Filtrer les éléments par date : dimanche, 05 mars 2017
Antsohihy: Miantona ny paompy gazoala, misy kosa ny lasantsy
lundi, 06 mars 2017 00:06
Météo: Mihamanantona hatrany ny sisintanin'ny Madagasikara
Mihamanantona hatrany ny sisintanin'ny Madagasikara ilay rivodoza ENAWO. Tombanana hiditra eo anelanelan'Antalaha sy Toamasina rahampitso alatsinainy halina.
dimanche, 05 mars 2017 23:06
Météo: ENAWO s'approche
ENAWO s'approche de la côte de Madagascar entre Antalaha et Toamasina.
dimanche, 05 mars 2017 22:19
Toamasina : Rongony 35 kg nodoran’ny Polisy
Saron’ny Polisy misahana ny fandikan-dalàna Toamasina tarihan’ny Kaomisera Raelison Gerverin tao Tanamakoa 12/14 ny alarobia lasa teo ny mpivarotra rongony amin’ny harona, taorian’ny fanomezam-baovaon’ny olon-tsotra tsara sitra-po.
Roa lahy ireo tratra tamin’ilay trano efatra tao anaty tokontany be tao an-toerana, satria raha nosavaina ny trano voalohany dia tsy nahitana na inona na inona fa tamin’ny trano faharoa vao nahitana harona misy sachet vitsivitsy nisy entana efa vonona hamidy, avy eo tamin’ny fisavana ilay trano fahatelo no nahitan’ny mpitandro filaminana rongony tao anaty gony roa.
Nodoran'ny Polisy moa ireo rongony milanja 35 kg ireo.
dimanche, 05 mars 2017 22:14
Ampanefena - Sambava: Voalakon'ny fitsaram-bahoaka ireo mpangalatra lavanila, miady amin'ny fahafatesana
Raha tsiahivina, dia mpamily Bajaj mpangalatra lavanila izay tratra teo atsimon'ny Parcage Antanamiketraka, io tolakandro io.
Nisy Zandary efa-dahy ihany tonga tao fa tsy nahasakana ny Fokonolona aman-jatony izay efa tezitra amin’ity halatra lavanila tsy misy farany ity.
Efa azon’ny Zandary ireo mpangalatra ary raha iny hoentina any Ampanefena iny dia tratry ny sakan-dalana nataon’ny Fokonolona.
Nosintomin’ireto farany tao anaty 4L nentin'ny Zandary ireo mpangalatra hatao fitsaram-bahoaka.
Io hariva io dia miady mafy amin'ny fahafatesana noho ny ratra nahazo azy ireto mpangalatra ireto. Ao amin'ny birao Fokontany Antamiketra Isokitra ao Antsirabe Nord Ampanefena izy ireo amin'izao.
Ireo Zandary dia efa manantona eny an-toerana fa vitsy ary matahotra ny hatezeram-bahoaka ihany koa izy ireo.
dimanche, 05 mars 2017 21:41
Fianarantsoa : Raiaman-dreny mahafehy ny teknolojia
Notolorana fanomezana ho fanamarihana ny taom-baovao ireo Raiamandreny eto Fianarantsoa izay mahafehy ny teknolojia sy miserasera amin’ny alalan’izany. Miisa 5 izy ireo no voamarina fa 60 taona no mihoatra ka mpikambana eo anivon’ny vondrona Madagasikara hoan’ireo foko rehetra eny amin’ny facebook.
“Ny tanjona dia ny hanehoana an'izao tontolo izao fa manaraka toetr'andro ny Raimanadreny malagasy maro ary miezaka ny mitrandraka fahalalana sy vaovao amin'ny alalan'ny teknolojia misy” hoy ny mpandrinra izany vondrona izany.
Ny Fikambanana AJIPAD na Association des Jeunes Intellectuels Promoteurs et Acteurs de Développement no tompon-kevitra sy nanatanteraka izany fanomezam-boninahitra izany miaraka amin’ity vondrona misy azy ireo ity.
dimanche, 05 mars 2017 18:46
Sambava : Mpamily Bajaj iharan’ny fitsaram-bahoaka
Manasa tanana ny mpanolotsain’ny Kaominina Antsirabe Nord fa tsy naharo mpangalatra lavanila izay tratra teo atsimon'ny Parcage Antanamiketraka, io tolakandro io.
Misy Zandary efa-dahy ihany tonga ao fa tsy nahasakana ny Fokonolona aman-jatony izay efa tezitra amin’ity halatra lavanila tsy misy farany ity.
Nosintomin’ireto farany teo ampelatan’ny Zandary ireo mpangalatra hatao fitsaram-bahoaka. Ahiana ny toe-draharaha raha mampiasa basy ny Zandary.
dimanche, 05 mars 2017 18:31
Fianarantsoa : Mandray anjara amin’ny hetsika 8 marsa
Tanterahina mandritra ny dimy andro ny fanamarihana ny Andro maneran-tany ho an’ny vehivavy eto Matsiatra Ambony. Nanomboka omaly sabotsy izany tamin’ny alalan’ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana.
Hetsika toy ny zumba, fanatsarana toerana maitso, fitiliana ny diabeta sy ny homamiadana mety mahazo ny vehivavy no isan’ny fanentanana entina miandry ny ivon’ny fanamarihana. Ramatoa vadin’ny Lehiben’ny Faritra no mitarika ny fotoana.
“Vehivavy mahefa, antoky ny fampandrosoana” no lohahevitra voizina amin’ity taona ity. Ezaka manonkana enti-miatrika izany ny fampitomboana ny fidirambolan’ny tokantrano amin’ny alalan’ny tetikasa sy fananganana orinasa madinika sy salasalany amin’ireo lalam-pihariana misy aty an-toerana.
dimanche, 05 mars 2017 18:29
Solidarité Antsakabary: L'Eglise FJKM appelle ses fidèles
L'Eglise FJKM appelle ses fidèles à faire don aux sinistrés d'Antsakabary, où il y a 25 familles parmi les siennes sinistrées et une Eglise FJKM incendiée.
dimanche, 05 mars 2017 16:21
Toetrandro: Mahery vaika i ENAWO
Mikisaka miadana mianatsimo ilay rivodoza ‘ENAWO’. Tamin’ny 12 ora omaly asabotsy 04 marsa dia tany amin’ny 698 Km Avaratra Atsinanan’Antalaha no nisy ny foibeny.
dimanche, 05 mars 2017 15:48
Kianjan'ny Kanto: Tolo-tanana ho an'ny Antsakabary
Notanterahana anio asabotsy 04 martsa ny Tolo-tanana Antsakabary izay natao teny amin’ny Kianjan’ny Kanto Mahamasina.
Nafana ny fanentanana teny an-toerana, ary dia maro tokoa ireo nanantanteraka ny adidiny ho an’ireo tra-boina vokatry ny fandoroan'ny polisy ny tranon'ireto mponina amin'arivony ireto.
Ny tarika Rossy sy Din Rotsaka no nanao ny fanentanana teny an-toerana ary natevenin'ireo mpanakanto avy any amin’ny faritra maro.
Mbola mitohy hatrany moa ny hetsika.
Ny Filoha Andry Rajoelina moa dia nanohana mavitrika ity hetsika ity.